१७ बर्षमा ड्राईभर बनेका भाईको गायकको भन्दा खतरा स्वर । सबैले सहयोग गरे, गायक बन्छु भन्दै रोए (भिडियो हेर्नुस) « गोर्खाली खबर डटकम
(शिशिर भण्डारी) काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ रत्नपार्क रुटमा दैनिक ९७७४ नम्बरको एउटा बस गुड्ने गर्दछ । गुडिरहेको गाडीलाई नियालेर हेर्ने हो भने एउटा कलिलो ठिटोले बस हुईकाईरहेको देखिन्छ । सानै उमेरमा अनेक ठक्कर खाएका मात्र २३ बर्षका बसका चालक, यि हुन्, सुजन बाबु गुरुङ । सिन्धु पाल्चोक जिल्ला मेलम्चीका सुजनले ५ बर्ष भयो, गाडी चलाउन थालेको । हामी बिहान ९ बजे बुढानिलकण्ठ पुग्दा उनी एक टिप गरेर हामीलाई पर्खी बसेका रहेछन् ।
निकै इमान्दार, नरम स्वभावका सुजनसंग एउटा लुकेको कला छ, उनी सुमधुर स्वरमा गीत गाउंछन् । उनको ठुलो सपना छ,गीत रेकर्ड गर्ने अनि सबैले चिन्ने गायक बन्ने । उनको सपना बुझेर मैले उनलाई एउटा बाचा गरे । सुजनको यो सपना पुरा गर्न तपाई सबैको साथ पाए, हामी पक्कै पनि उनको आवाजमा गीत रेकर्ड गराएर म्युजिक भिडियो पनि बनाउनेछौं । सुजन बाबु गुरुङको जीवन कथा कुनै फिल्मको जस्तो छ । यति सानो उमेरमै उनले अनेकौं दुख भोगेका छन् ।
परिवारको माईलो छोरा उनी ११ बर्षको उमेरमै स्कुलबाट भागेर गाउंबाट काठमाडौं छिरे र यहां भाडा माझ्नेदेखि अनेक काम गरे । सुजनको आमा बिरामी छिन्, भर्खरैको पहिरोले भएको सानो घर पनि लग्यो, बुवा कान सुन्दैनन्, अनि कमाई गर्ने सुजनको पनि लकडाउनले गर्दा पहिले जस्तो कमाई छैन, आमाको उपचार गर्न उनीसंग पैसा छैन । आमाको लागि लेखेको गीत सुनाउंदै सुजन एक्कासी भक्कानिए ? सुजनको भोगाई सुन्दा मन साह्रै रोयो । आमालाई स्वास्थ्य उपचार गर्न गाह्रो छ र लकडाउनले कमाई पनि छैन भनेपछि मैले केहि सहयोग पनि गरें ? भिडियो हेर्नुस-